I-Broadleaf Commerce: Tshala Imali Ngokwezifiso, Hhayi Ukulayisense | Martech Zone
NgoMgqibelo, Juni 27, 2015 NgeSonto, ngoJuni 28, i-2015 Douglas Karr
Ngaphakathi kwesikhala sobuchwepheshe bokumaketha, kube nokukhula okukhulu ngeSoftware njengeSevisi kanye nokukwazi ukuthenga okudingayo ngaphandle kwebhokisi. Ngokuhamba kwesikhathi, i-SaaS yehlule izindleko zokwakha futhi izinkampani eziningi ze-SaaS zasuka njengoba zanqoba yakha uqhathanise nokuthenga impikiswano yesabelomali. Eminyakeni eyalandela, futhi abathengisi bazithola sebengene komunye umgwaqo onqamula indlela. Iqiniso ukuthi ukwakha kuyaqhubeka ukwehla kwamanani entengo.
Kunezizathu eziningana zokuthi kungani izindleko zokwakha zehla:
Ukusetshenziswa kwekhompyutha okudinga kuphela ukuthi izinkampani zikhokhe ukusetshenziswa ngakunye kwehlile iphuzu lokungena lisuka kumashumi ezinkulungwane laya kwamapeni ngokoqobo.
Ama-API nama-SDK - cishe yonke insizakalo inikezela ngohlelo lokuhlelwa kohlelo, futhi imikhiqizo eminingi oyisebenzisayo ezinhlelweni ze-SaaS isebenzisa lawo ma-API afanayo. Ngokudlula ipulatifomu futhi ngqo emthonjeni, ungonga ithani lemali. Futhi awudingi nokuthi ubhale ikhodi yokuqala ngoba iningi labo linikela ngamaSoftware Kits ukuze uqalise.
Open Source - abantu basithathe kancane isikhalazo somthombo ovulekile. Abaningi bayenqaba, befuna ukuphepha, ukuphepha, kanye namaqembu azinikezele ngezinsizakalo zamapulatifomu wesoftware ephathelene. Kepha amabhizinisi akhiwe emthonjeni ovulekile ongenazo zonke lezo zinzuzo kuphela, anezinkampani ezingamakhulu noma izinkulungwane eziqinisekisa nokuphepha, ukuphepha nokuhlinzeka ngezinsizakalo.
Izinhlaka - Izinhlaka zentuthuko zinikela ngesakhiwo esibi kakhulu esihlinzeka onjiniyela ngesiqalo esikhulu sekhanda ekwakheni amapulatifomu. Izinhlaka nazo ziyasekelwa futhi ziyaqhubeka nokwenza ngcono ngokuhamba kwesikhathi njengoba onjiniyela behlinzeka ngempendulo noma behlinzeka ngezixazululo zabo.
Faka konke lokhu ndawonye, ​​futhi inkampani ayidingi ukwenza imihlatshelo kuzici nokusebenza ngesisombululo esingaphandle kwebhokisi. Futhi abahambi bephula ukukhokhela isisombululo esiqhubeka nokukhuphula amanani njengoba beqhubeka nokwanda. Phakathi kukhona izinkampani ezifana I-Broadleaf Commerce.
Isici sesixazululo sebhizinisi esisethwe silungele izidingo ze-Fortune 500, I-Broadleaf inikeza ukusebenza okufunwa kakhulu ukusekela i-B2C, B2B, ne-B2B2C eCommerce ngenani elihle emakethe. Zonke izixazululo zingenziwa ngezifiso ukuqinisekisa ukuthi isiza sakho se-eCommerce senzelwe izidingo zakho ezithile. Ukusebenza okuqinile ngaphakathi kohlaka olungasindi kuboleka ezinye zezici ezenza iBroadleaf ivelele kokunye. Ungalokothi uzizwe uvinjelwe uhlu lwezici futhi.
Ngesikhathi IRCE, Ngithole ukuhlala phansi UBrian Polster ye-Broadleaf Commerce futhi saxoxa ngokuthi lokhu kuguqula kanjani indawo ye-e-commerce nokwenza izinhlaka zamabhizinisi ezinjengeBroadleaf zihehe kakhulu kubathengisi nasezinkampanini zezohwebo eziku-inthanethi ezidinga ukuguquguquka nezixazululo ezenziwe ngokwezifiso zokuthengisa online.
Izici zebhizinisi ze I-Broadleaf Commerce kuhlanganisa:
Inqola yokuthenga - kufaka phakathi ikhono lokuphatha inqola nenqubo yokuphuma kanye nokukwazi ukubophezela ukukhushulwa kokumaketha nokuthengisa kulokho okusenqoleni.
Sesha bese upheqa - Ukuhlelwa kwe-Smart search, ukuhlukaniswa ngezigaba okuqondile, izakhiwo ze-URL ezikhiqizwe umsebenzisi, kanye nemikhuba enobungani be-SEO nxazonke ayenzeli isipiliyoni esihle somsebenzisi kuphela, kepha isayithi elitholakalayo.
Ukuphathwa kwe-oda - Ukubuyekezwa kwe-Basic Order Management, isimo kanye nemininingwane konke kutholakala kubamele abasebenza kumakhasimende (ama-CSR), ngenkathi amakhasimende enziwa ukuthi aqaphele isimo se-oda ngesaziso se-imeyili. Ngezidingo eziningi ezinamandla, i-Broadleaf ingaphatha ama-oda wokuqhekeka, izigaba zokugcwaliseka, izinqubo ze-RMA, nemithetho yebhizinisi ezungeze izidingo ze-eCommerce.
Ukuphathwa kwamakhasimende - Kubhalisiwe noma kungabhalisiwe, kunemininingwane yokuxhumana noma ngaphandle kwayo, i-Broadleaf ivumela izimfanelo zamakhasimende kuyo yonke inqwaba yezici zokumaketha nezokuphatha… kusuka ezintweni ezikhethekile kuya kokuqukethwe kwamakhasimende okwenziwe ngokwezifiso.
Ukunikezwa namaphromoshini - nikezela ngeminikelo ekhonjiwe kumakhasimende onke, ama-oda, izinto nezimo zamanani. Kusuka kuthenga eyodwa, thola eyodwa (i-BOGO) ukuze uthengise phezulu kuzipesheli ezenziwe ngezifiso.
Ukuphathwa komkhiqizo - yonke imikhakha yezidingo Zokumaketha Nokuthengisa. Kugcine kulula njengokufaka igama lomkhiqizo, incazelo, intengo, ne-URL ngaphansi kwesigaba, noma kuyinkimbinkimbi njengokuchaza izinketho zomkhiqizo, ulwazi lokumaketha, imidiya ehlobene, izinketho zokuthumela kanye nezimpawu zomkhiqizo.
Multi-Konke - Abaqashi abaningi, amasayithi amaningi, imali eningi, neziteshi eziningi.
Uhlelo Lokuqukethwe Lokuqukethwe - umhleli we-WYSIWYG wokuphatha izinto ezifana namabhulogi namanye amakhasi wokuqukethwe achazwe ngaphambilini.
Futhi-ke, uhlaka luvumela izinkampani ukuthi zelule noma yiliphi ibhizinisi, zengeze izinhlangano zazo ezingokwezifiso, futhi zishintshe noma zandise noma iyiphi insizakalo, i-DAO, noma zenze abalawuli ngokwezifiso. Ilayisense ye-edition yebhizinisi ifaka ukusekelwa kobungcweti ngezivumelwano zeleveli yesevisi (SLAs).
Tags: brian polsterebanziukuhweba okubanziCommercee-commerceezokuhweba ngekhompyutha